Igama iBeststable County's Dredge entsha - Ellicott Dredges
I-Barnstable County ikufuna ukuthi uyiqambe igama elisha
Uhlelo lweBarnstable County Dredge Programme selwethule umkhankaso onikeza umphakathi ithuba lokukhetha igama labazongena kuwo kabusha.
Umkhumbi i-Ellicott njengamanje usakhiwa eBaltimore, eMaryland kanti kulindeleke ukuthi uqhubeke nokuya eKapa ngesinye isikhathi ngenyanga ezayo.
Umlawuli Wesifunda Sokungena Kwesifunda uStephen Tebo uchaze lesi sinqumo.
“Sicabange ukuthi sizowubuyisela kubahlali baseBarnstable County ukuze babe nomkhankaso ojabulisayo ukuze babone ukuthi singakwazi yini ukuqamba amagama, futhi kunokuba simane sibakhethe igama sibona ukuthi kuzoba ngcono ukuqwashisa abanye ngalokho okwenzeka namuhla empeleni lenza isifunda kanye namadolobhana akulo dolobha. ”
Leli dolobha selivele lisebenza nge-20 eneminyaka engu-Ellicott dredge, ebizwa ngokuthi "iCod Fish" eye yasebenza izinhloso eziphindwe kabili. Okokuqala, izinsizakalo zisiza amadolobhana aseCape Towns kumaphrojekthi akwabanisa amaphesenti acishe abe ngu-70 ngaphansi kwamanani wemakethe, okuvumela amatilosi ukuba bakwazi ukuzulazula kalula iziteshi ngokuvula imigwaqo yamanzi.
Okwesibili, uhlelo lokudonswa kwedolobha luphinde lusebenzise konke okubunjiwe kumaphrojekthi ahlukahlukene wokuphinda usebenze ebhishi kuyo yonke indawo, ukonga amadolobhana imali kulokho okungabiza kakhulu.
Umkhumbi omusha, kodwa ongabizwa ngamagama, mkhulu futhi unamandla kune- “Cod Fish” futhi ngenxa yalokho kulindeleke ukuthi uvumele isheduli ebukhali kakhulu yokuphelelwa, ukuze uhlangabezane kangcono nezidingo zomphakathi.
Umkhankaso wokuqanjwa kabusha kwegama lokuqanjwa kabusha uzovela ngezigaba ezimbili: Ngesikhathi sesigaba sokuqala, umphakathi ungahambisa igama kusukela manje kuze kube ngu-Agasti 21st ku-barnstablecounty.org.
UTebo unxusa umphakathi ukuthi ube nobuciko, hhayi nje ubuciko kakhulu.
"Sizame ukuyigcina njalo engqungqutheleni yaseCape futhi, bekukhona indatshana eminyakeni ethile emuva lapho baqamba khona isikebhe ngokuthi 'McShippy' ngoba leyo yayiyinto enkulu, niyazi ukuthi 'McDreamy' futhi lezo zinhlobo zezinto zazilapho. ngakho-ke sifuna ukugcina imihlahlandlela yalokho ekugcina kungagcina kubizwe. ”
Ikomidi elikhethiwe eBarnstable County liyobe selinciphisa izethulo lize liye kwabayishumi abaphezulu, kanti ngesikhathi sesigaba sesibili, umphakathi uzokwazi ukuvota ngalawo magama aphezulu ayishumi ukusuka ngo-Agasti 23nd kuya ku-Agasti 31st.
Ozuzile uzomenyezelwa kuwebhusayithi yeBarnstable County ngoSepthemba 1st.
"Sisebenza kwenye yezindawo ezibucayi kakhulu kwezemvelo emhlabeni - sifuna igama elibonisa ngokulinganayo umsebenzi weBartstable County Dredge ukukhulisa impilo yesifunda sethu negama elihlobene ngqo neCape Cod," kusho uLeo Cakounes , USihlalo weBarnstable County Commissioners, "Lo mkhankaso uzonikeza wonke umuntu waseCape Cod ithuba lokuzizwa eyingxenye yalomsebenzi obalulekile ozoba nomthelela omubi futhi omuhle emvelweni yethu."